China 201 ekpo ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara eriri igwe rụpụta na Factory | Huaxiao
Ngwongwo nchara 201 nwere acid na alkali na-eguzogide, njupụta dị elu, na-egbuke egbuke na-enweghị afụ, na enweghị ntụtụ. Ọ bụ ihe dị elu maka imepụta usoro elekere dị iche iche na elekere nche.
Sino igwe anaghị agba nchara ikike banyere 201 Na-ekpo ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara , 201 HRC
Ọkpụrụkpụ: 1.2mm - 10mm
Max eriri igwe ibu: 40MT
Imecha: NO.1, 1D, 2D, # 1, na-ekpo ọkụ akpọrepu okokụre, nwa, Anneal na pickling, na nkume igwe nri imecha
201 Otu ọkwa site na ọkwa dị iche iche
201 Chemical Chemical LISCO – L1:
C: .015, Nke: ≤Ogbe Igwe: 8.0-10.5, Cr: 13.5～16.00, Ni: 1.0～3.82, S: .00.03, P: ≤0.06 Cu: <2.0, N≤0.2
201 n'ibu LISCO – L1:
Ogologo (%):> 35%
Isi ike: <HRB99
Nkọwa dị mfe gbasara 201 na 304
N’anya ọtụtụ ndị na-azụ ahịa, igwe anaghị agba nchara 304 na igwe anaghị ata nrị 201 bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a na-apụghị ịkọwapụta na ọ ga-esiri ike iji anya gba ọtọ dị iche. N'ebe a, anyị ga-ewebata ụfọdụ ụzọ iji mata ọdịiche dị n'etiti 304 na 201.
1.Specifications: A na-ejikarị efere igwe anaghị edozi ụdị abụọ nke 201 na 304, ihe bụ eziokwu bụ ihe dị iche iche, 304 ezigbo mma, mana ọnụahịa ahụ dị oke ọnụ, 201 ka njọ. 304 gụnyere mbadamba igwe anaghị edozi na ụlọ, yana 201 bụ igwe anaghị agba nchara efere.
Ihe mejupụtara nke 2,201 bụ 17Cr-4.5Ni-6Mn-N, nke bụ nchara ọzọ iji chekwaa igwe nchara na nchara 301. Ejiri magnetik mee ihe mgbe nhazi oyi maka ụgbọ okporo ígwè.
Ngwunye 3.304 bụ 18Cr-9Ni, nke bụ igwe anaghị agba nchara na igwe na-eguzogide okpomọkụ. Maka akụrụngwa maka imepụta nri, akụrụngwa kemịkal Xitong, ike nuklia wdg.
4.201 bụ ọdịnaya manganese dị elu, ihu na-enwu gbaa na ọchịchịrị na-enwu gbaa, ọdịnaya dị elu manganese dị nchara nchara. 304 nwere chromium ndị ọzọ, elu ya bụ matte, anaghị ajari. E nwere ụdị abụọ nke tinye ọnụ. Ihe kachasị mkpa bụ nkwụsi ike nke corrosion dị iche iche, 201 na-eguzogide corrosion adịghị mma, ya mere ọnụahịa ga-adị ọnụ ala karịa. Ma n'ihi na 201 nwere nickel dị ala, ya mere ọnụahịa dị ala karịa 304, ya mere nkwụsị nke corrosion adịghị mma dị ka 304.
5. Ihe dị iche n’agbata afọ 201 na 304 bụ nsogbu nickel na manganese. Ọnụ ego 304 dịzi ọnụ ugbu a, mana opekata mpe 304 nwere ike ịkwado na ọ gaghị ata nchara n'oge eji eme ihe. (Jiri igwe anaghị agba nchara maka nnwale)
6.Stainless steel adịghị mfe nchara n'ihi nhiwe nke chromium oxide n’elu igwe ahụ nwere ike ichekwa ahụ nchara, ihe 201 bụ akwa manganese anaghị agba nchara 304 siri ike, carbon dị elu na nickel dị ala.
7. Ngwakọta dị iche (ọkachasị na carbon, manganese, nickel, chromium nwere 201 igwe anaghị agba nchara ruo 304).
Nke gara aga: 316Ti oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara eriri igwe
Osote: 310s na-ekpo ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara